RASMI: Kooxda PSG oo shaacisay liiska xiddigaha ay kala hortagayso Kooxda Man City ee Champions League… (Miyuu maqan yahay Mbappe?) – Gool FM
RASMI: Kooxda PSG oo shaacisay liiska xiddigaha ay kala hortagayso Kooxda Man City ee Champions League… (Miyuu maqan yahay Mbappe?)
(Paris) 03 Maajo 2021. Waxaa si rasmi ah loo shaaciyey liiska xiddigaha kooxda PSG ay kala hortagayso naadiga reer England ee Manchester City lugta labaad ee afar dhammaadka Champions League, kaasoo habeen dambe ka dhici doona magaalada Manchester.
Macallin Mauricio Pochettino ayaa haatan soo saaray liiska xiddigaha uu ula safrayo magaalada Manchester, maadaama ay garoonka Etihad kula ballansan yihiin Man City lugta labaad ee Semi-finalka Champions League.
Kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ayaa indhaha ku haysa inay sameyso soo laabasho cajiib ah, isla markaana ay dhinaca kale u rogto natiijadii looga soo adkaaday lugta hore ee garoonkeeda 2-1.
Haddii ay PSG ka soo laabtaan guuldarradii lugtii koowaad ee afar dhammaadka Champions League ku soo gaartay garoonkooda Parc des Princes, waxa ay sanadkii labaad oo xiriir ah iska xaadirin doonaan Final-ka UEFA Champions League.
Waxaa liiskan ka soo muuqday weeraryahanka da’da yar ee reer France, Kylian Mbappe, kaasoo dhaawac ku seegay kulankii Sabtidii ay kooxdiisa PSG guul 2-1 ka soo gaartay naadiga Lens, waxaa la filayaa inuu ciyaari doono kulanka ay habeen dambe ku ciyaarayaan garoonka Etihad.
Dhanka kale Idrissa Gana Gueye ayaa ka ganaaxan kooxda reer France ee PSG, laakiin sidaas oo ay tahay kooxda inteeda kale ayuu u la saftay Magaalada Manchester si uu u dhiiri-geliyo xiddigaha kooxdiisa.
Haddaba halkaan hoose ka eeg liiska kooxda PSG ee booqanaya Manchester City oo dhammaystiran:-